musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kunhuhwirira-Vadyi Vanorangarira: Kenza Inokonzera Kusvibiswa
Odor-Eaters, yakagoverwa neBlistex Corp., iri kurangarira nokuzvidira yakawanda yeOdor-Eaters spray zvigadzirwa zvakagadzirwa pakati pemazuva aKurume 1, 2020 naNyamavhuvhu 22, 2021, kusvika padanho revatengi. Muedzo wemukati wakaratidza hushoma huwandu hwekusvibiswa kwebenzene mune zvimwe zvakawanda zveizvi zvigadzirwa zveaerosol.
Mijenya ina Odor-Eaters® Spray Powder inokanganiswa nekurangarira uku kwekuzvidira, kunyanya:
UPC Chigadzirwa Chigadzirwa Roti Zuva rekupera
041388004310 POUDA YEZVINONHUWA (113 g) LOTD20C04 EXP 03/2022
041388004310 POUDA YEZVINONHUWA (113 g) LOTD20K13 EXP 10/2022
041388004310 POUDA YEZVINONHUWA (113 g) LOTD21H03 EXP 08/2023
Benzene inorongedzerwa secarcinogen yemunhu, chinhu chinogona kukonzera gomarara zvichienderana nehuwandu uye huwandu hwekufumurwa. Vanhu kutenderera pasirese vane zuva nezuva, kugara vachiratidzwa benzene kubva kune akawanda masosi, mukati nekunze. Benzene inowanikwa kwose kwose munharaunda. Kuratidzwa kune benzene kunogona kuitika kuburikidza nekufema, nemuromo, uye kuburikidza neganda.
Zvigadzirwa zvekupfapfaidza zveOdor-Eaters nekuzvidira zvakaiswa mumagaba aerosol. Zvigadzirwa zvakagoverwa munyika yose muCanada kuburikidza nevatengesi vakasiyana-siyana. Vatengi vanofanirwa kumisa kushandisa aya chaiwo Odor-Eaters epfapfaidza zvigadzirwa uye vorasa zvakakodzera. Ndokumbira utarise mufananidzo uri pazasi kuti uwane gwara rekuti ungawana kupi kodhi kodhi yakawanda pagaba.
Kutanga munaNovember 18, 2021 na8 am (EST), vatengi vanogona kuwana odoreatersrecall2021.com kukumbira kudzoserwa chigadzirwa uye nerumwe ruzivo. Vatengi vanogona zvakare kubata 1-855-544-4821 nemibvunzo Muvhuro kusvika Chishanu kubva 8:00am-5pm (EST). Odor-Eaters iri kuzivisawo vatengesi vayo netsamba uye iri kuronga kudzoserwa kwese nekuzvidira kurangarirwa kwakawanda kwezvigadzirwa zvekupfapfaidza. Vatengi vanofanirwa kubata chiremba wavo kana mupi wehutano kana vakasangana nematambudziko angave ane chekuita nekushandisa izvi zvigadzirwa zvekupfapfaidza.
Kuita kwakashata kana matambudziko emhando yepamusoro anowanikwa nekushandiswa kwezvinhu izvi zvakawanda zvinogona kutaurwa kuHealth Canada's MedEffect Adverse Reaction Reporting chirongwa chingave pamhepo, nguva dzose tsamba kana fax.